Izixhobo ezi-5 zokukunceda uchonge imithombo yolwazi | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Izixhobo ezi-5 zokukunceda uchonge imithombo yolwazi
Njengenxalenye yenkqubo yoyilo sihlala sijikela kwi-intanethi ukukhangela izingqinisiso okanye inkuthazo elingana noko sikwenzayo. Amaxesha amaninzi kuyenzeka kuthi oko xa ukhetha iifonti, Sibona umfanekiso kunye nefonti esiyithandayo kwaye enokusisebenzela, kodwa asazi ukuba yintoni. Kulapho umsebenzi wethu uya usiba nzima, kuba ukuchonga ifonti, ngaphandle kokuba ithandwa kakhulu okanye iza kufakelwa ngokungagqibekanga kwikhompyuter, akukho lula.
Kungenzeka kwakhona ukuba umthengi usicela ukuba sisebenze kubugcisa obenziwe ngaphambili ngomnye umyili, kodwa ayinazo iifonti ababezisebenzisa.
Ngethamsanqa, kwaye njengoko iyimeko eziveza kubo bonke abayili, sele ikho kukho ezinye izixhobo kwi-intanethi yenzelwe ukuchonga imithombo, konke okufuneka ukwenze ukugcina umfanekiso wesalathiso kwaye emva koko siza kuchaza indlela yokuwasebenzisa.
1 Yintoni ifonti
2 Yintoni ifonti
3 Umatshini weFontSpring Matcherator
4 Umatshini weFontSquirrel Matcherator
Kusenokwenzeka elona phepha laziwa kakhulu Ukuchonga imithombo engaphezulu kwe-133.000 ebhalisiweyo kwinkqubo yakho.
Ukuyisebenzisa, konke okufuneka ukwenze yile layisha umfanekiso Isalathiso kwi IJPG okanye iPNG, sika okanye ukhethe ebhokisini isicatshulwa esine-typography, kwaye ke uya kubona Iziphumo.
Nangona kulula kakhulu ukuyisebenzisa, sicebisa ukuba wena imifanekiso ihlala ikumgangatho olungileyo kwaye el isicatshulwa sikwindawo ethe tyaba. Ukuze inkqubo ikwazi ukuyichonga ngokukhawuleza, kukhethwa ukuba abalinganiswa bangadibani, njengakwifonti yokubhala, kwaye lo mthetho mnye uya kusebenza phantse kuzo zonke izinto ezichonga iifonti ezikwi-intanethi.
Icala elisezantsi kuphela kwesi sixhobo kukuba imithombo ebonelela ngeziphumo ziyathengisa, Oko kukuthi, kuya kufuneka uhlawule ngokusetyenziswa kwayo. Ukuba le ayisiyongxaki kuwe, eli phepha liya kuba luncedo kuwe.
Ngenisa umfanekiso kuFonti
Yenye yezona zinto zichazayo kwi-intanethi. Ngokungafaniyo ne-Font, eli phepha likuvumela kungekuphela Ngenisa imifanekiso, kodwa kunye I-URL yewebhusayithi iphi ifonti oyikhangelayo.
Into ekufuneka uyenzile kuku yongeza umfanekiso kwiJPG okanye kwiPNG, kwaye ke kuya kufuneka khankanya ngesandla kwi zekhibhodi abalinganiswa besicatshulwa osicelileyo. Oku kuvumela ukungqinisisa ukuba umlinganiswa uchanekile kwaye awuphazanyiswa nomnye.
Xa ifayile ye- iziphumo, ungazihluza ungene simahla okanye siyarhweba, Ke ukuba ujonga iifonti ezingahlawulelwayo, eli phepha linokukunceda.
Sincoma ukuba imifanekiso oyilayishayo yile Buena calidadukuba isicatshulwa sikumgca omnye ngokukhethekileyo, kwaye ukuba abalinganiswa abaxhunyiwe.
Iziphumo zomgca kwiFont yintoni
Umatshini weFontSpring Matcherator
Lo mthombo wokuchonga ukongeza ekubeni une elona phepha lihle kakhulu kunangaphambili, yenzelwe ukuba ufumane zonke iintlobo zeefonti, kwaneyona inzima okanye inzima ukuyifumana.
Njengakwizixhobo zangaphambili, kuya kufuneka - layisha umfanekiso wakho kwiJPG okanye kwiPNG, okanye ungangenisa i-URL yephepha. Nje ukuba umfanekiso ulayishwe, unayo kunokuba usike okanye ubeke ibhokisi kwisicatshulwa ufuna ukuchonga, kwaye ukuba ukhetha njalo, ungabachaza ngesandla abalinganiswa, kodwa oku kuyanyanzeleka kwaye kuphela xa iziphumo ezinikiweyo zingakuqinisekisi.
Ngokukwazisa iziphumo zophendlo lwakho uyakuqonda ukuba iifonti zorhwebo kwaye ufanele ukuhlawula. Nangona kunjalo, nokuba awunamdla wokuhlawulela ifonti, eli phepha linokukunceda ufumane uhlobo lohlobo oluntsonkothileyo okanye ongakhange uluzuze ngaphambili, kuba inenkqubo yokuqonda ekumgangatho ophezulu ngakumbi kunezinye izinto zokuchonga kwaye iyakwazi ukufumana amanqaku. I-OpenType kunye neeGlyphs.
Sika isicatshulwa kwibhokisi kwiFontSpring Matcherator
Umatshini weFontSquirrel Matcherator
Eli phepha linefomathi efana kakhulu neFontSpring Matcherator ngokwendlela yoyilo kunye neziphumo, nangona kunjalo inamanye amaphepha okufumana iifonti, kuyacetyiswa ukuba ujonge, ngakumbi ukuba ujonga iifonti zasimahla.
Kufuneka - layisha umfanekiso wakho kwiJPG okanye kwiPNG, okanye yongeza i-URL yewebhu oyikhangelayo, kunye ukunciphisa isicatshulwa osifunayo indawo ebhokisini. Kuxhomekeke kumfanekiso kunye nefonti, iya kukubuza okanye ungachazi abalinganiswa ngesandla.
Umahluko kwisazisi esidlulileyo kukuba i-squirrel yamagama ukongeza ekufumaneni iziphumo iifonti zorhwebo, ikwanayo iifonti ezisemgangathweni kakhulu ezisimahla.
Ngenisa umfanekiso kwiFontSquirrel Matcherator
Kule fonti yesazisi awunyanzelekanga ukuba ulayishe nayiphi na imifanekiso. Ngokusisiseko iqulathe ukukhangela ngokulahla, ukukhetha iimpawu zomthombo ofuna ukuwufumana, nokuba kungoku imbonakalo, ngokufana neminye imithombo, ngegama, njl. ude ufumane uhlobo lohlobo olufunayo, okanye olufanayo. Iziphumo zibandakanya zombini iifonti zorhwebo njengeefonti zasimahla.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Idizayini yeMifanekiso » Izixhobo ezi-5 zokukunceda uchonge imithombo yolwazi
Uyilo kunye nokuPapasha iNcwadi usebenzisa iAmazon KDP
I-IKEA iyila kwakhona i-logo yayo, nangona ingenazo iindaba ezininzi ukusukela kwi-1992 yangaphambili